Nothisa isiZulu sakho ngalezi zisho
Ngaphambilini sike sasika elijikayo ngezisho, siveza ukuthi izaga ziwubuciko ekukhulumeni ulimi lwesiZulu. Izisho zinothisa ziphinde zikunandise ulimi. Yandisa ulwazi lwakho wezisho ngacosha kulezi: Ukuhamba ulifake isiphandla – ukuhamba ufuna into ethile eyigugu Ukugeza amehlo – ukubuka ngokujula into enhle Ukugubhazela uthotholwane – ukujabula kakhulu Uhlanga luwe ngendlela – ukwenzeka kwento ebivele ihlosiwe Indangabane – ukukhula … Read more
Tags Izisho, Ulimi
Ulimi lwesintu lujulile futhi lunonile ngokusetshenziswa nangokukhulunywa kwalo. Izaga nezisho indlela okukhulunywa ngayo sakutekula ukuchaza kabanzi ngaleyonto okukhulunywa ngayo. Ubungoti bokusebenzisa lendlela yokukhuluma kusukela emlandweni wento noma isenzo esithile. Lendlela okwakukhulunywa ngayo emandulo yakhula kwanda kwasabalala kwaba indlela ejwayelekile neyamukelekile emphakathini. Izaga nezisho zihlukene izigaba eziningana lapho zisetshenziswa khona. Kukhona eziphathelene nobuntu, kungaba indlela ophathe … Read more
Ngezansi izisho kanye nezincazelo zazo. Akulahlwa mbeleko ngakufelwa – Kusho ukungaphelelwa ithemba nasesimweni esibi Asilima sindlebende kwayo – Umuntu noma angaba nesici esinjani kodwa kubo uthandiwe Indangabane – Ukukhula Isizungu sibulala inkonyane – Ukuba nesizungu kakhulu Uhlanga luwe ngendlela – Ukwenzeka kwento ebivele ihlosiwe Ukotha umbovu – Ukuthukuthela kakhulu kodwa uqinisele, uzibambe uzame nokufihla ukudinwa … Read more